जेट एयरवेजसंग यात्रा गर्दा कतै ठ्गिमा त पर्नुभ्एको छैन? - InHeadline
जेट एयरवेजसंग यात्रा गर्दा कतै ठ्गिमा त पर्नुभ्एको छैन?
By Anu Rana on Feb 07,2018 - 20:02
विश्वव्यापि रुपमा जेट एयरवेजमा ६८ भन्दा बढी उडानहरू उद्ड्ने गरेता पनि त्यहाँ सामान शुल्क मार्फत ठगी र लुतपात गर्ने गरेको पाइन्छ । जबकि अन्य एयरलाइन्सले ३ देखि ४ डलरको चार्ज लिने गर्दछ तर त्यहाँ भने यात्रीहरूले भने सामान्य शुल्क भन्दा लगभग ६-७ गुणा बढी तिर्छन्।
जेट एअरवेजको खबर अनुसार जेट एयरवेजले २० डालर प्रति किलोग्राम लगाएकोमा जहाँ जुन २००० एनपीआर १३०० इण्र को राशि हो; निश्चित रूपले एक ठुलो रकम हो।
वास्तवमा, एक ग्राहकले अयोग्य शुल्क बढी भ्एको को कारण आफ्नो उडान रद्द गर्नु परेको थियो । त्यो ग्राहकले आफ्नो नाम बताउन चाहेन, उनी एक विद्यार्थी हुन र उनि दिल्लीबाट काठमांडू घर फर्किना लागेका थिए र उनीसँग थप सामान पनि थियो । ताकी , जब उसको थप सामान गणना गरिएको थियो त्यो लगभग ३३००० INR थियो। तर उनि त्यो त्यो दिन उडेका थिएन।
यदि तपाईं कम्पनी वेबसाइटको थप सामान क्यालकुलेटरमा जानुहुन्छ भने, तपाईं अर्थव्यवस्थाको उडान चयन गर्न सक्नुहुन्छ र "साभर" भाडा योजना उठाउन सक्नुहुन्छ।
जेनेट एयरवेजका लागि निराशाको एक गुच्छा अर्को किलोमिटर प्रति किलोको किलोग्रामको लागि २० अमेरिकी डलरको शुल्क लिने हो भने तपाईलाई स्वागत गरिनेछ।
यद्यपि, हामीले सोचेका थियौं कि यो वेबसाइट हुन सक्छ र काठमांडू अफिसलाई पनि पुष्टि गर्नको लागि भनिन्छ र तिनीहरूले उल्लेख गरे यो साँचो थियो।
अर्को पक्षमा व्यक्तिले हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिएका छन् कि, "यदि तपाईं दिल्लीबाट काठमाडौं जानुहुन्छ भने तपाईंलाई काठमांडू देखि दिल्ली सम्म २०अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम लगाइनेछ तपाईले प्रति किलोग्राम १० अमरीकी डालर खर्च गर्नुहुनेछ।"
टिकेट बिक्री गर्दा प्यासेन्जरले प्राप्त गर्न सक्ने कतिपय सुबिधा, नियम र कानूनहरुको जानकारी एजेन्टहरुले नगराई दिंदा लगेज हराउने, कस्टम एजेन्टहरुबाट ह्याण्ड ब्याग र लगेजका महत्वपूर्ण अनि प्रिय सामानहरु खोसिने र रित्तो हात गन्तव्यमा पुग्नु परेको लामो कहानी छ ।
दिल्ली देखी काठमाडौ सम्मको यात्रामा जेट एयरवेजमा धेरै मात्रामा लुटपाट, ठगी भएको छ अब तपाइको विचारमा के लाग्छ ?
ट्याग - टिकेट बिक्री , शुल्क , क्यालकुलेटर